Hiran State - News: HS:- Al Shabaab oo afka ka ilaalinaya waanu jabnay
HS:- Al Shabaab oo afka ka ilaalinaya waanu jabnay
HS:- Kooxkasta iyo dowladkasta oo awood is bida waxey leetahay waqti awoodooduna ma dhaafto intii ilaah ugu talo galay, sidoo kale wadankasta oo ku xad gudba wadan kale amaba ku gardarooda waxuu kala tagaa guud daro waxkastana ma noqdaan sidii ay doonayaan markaasi amaba u dhigaan oon ka aheyn sidii uu ilaah ugu talo galay.
Hadaba kooxda Shabaab iyo argagixisada ay ku marti galiyeen dalka Soomaalya oo uu shacabkoodu yahay dad muslim ah oo ay soo mareen culimo waaweyn oo diinta siwanaagsan u garanaya iskuna dheli tiri jiray amaba ay u kala baxsaneyd diinta, siyaasada iyo dhaqanka Soomaaliyeed marka laga hadlayo dadka reer miyiga ah, maxey ka faa'ideen dagaaladii ay dalka iyo dadka Soomaaliyeed u geeysteen?.
Sikastaba waxaa dalal badan oo caalamka ka mid ah ka curtay kooxo fowdo wadayaal ah oo dalalkii ay ka soo jeedeen inta danbiyo ka galay hadane la baxay ururo iyo magacyo diimeed iyagoona dalal badan oo ay shacabkoodu yahiin Muslim sida Afganistaan, Iraaq, Soomaaliya, Aljeria, Najeria iyo dowlado ka tirsan Bariga dhexe sida dalka Yemen intey tageen kadibna halkaasi la tagay dhaqano iyo arxan daro aad uga fog diinteena sharafta leh oo ah diin nabadeed waxkasta oo wanaag ahne ay ku qoran yahiin kitaabka qur'aanka oo ah mid aan waligii isbedelin, tan iyo markii ifkaan la keenay Nabi Maxamed (Nabadgalyo iy naxariis korkiisa ha ahaatee) oo ay si tartiib tartiib ah ay ugu soo dagayeen aayadaha qur'anka kariimka ah.
Sikastaba wadankasta markii ay tagayeen waxaa loogu soo dhaweyey si wanaagsan laakinse waxey dadkii ay u tageen ula tageen dhaqano iyaga u gaar ah oo aad uga fog diinta Islaamka. dib uguma noqoneyno dhibaatooyinka ay wadamadaas ka geysteen laakinse hadaanu dul marno argagixisada ku nool dalka Soomaaliya.
Dhawaantan ayey aheyd markii nin Masri ah oo dalkaasi iskaka cararay mudadii uu ku sugnaa madaxweyne Mubaarak dowladaasina mucaarad ku ahaa uu galay dalka Soomaaliya uu dib ugu soo laabtay dalka Masar markii uu dalka masar ka dhacay isbedelkii lagu afgambiyey madaxweyne Mubaarak, kadibna isagoo ka faaloonaya dalka Soomaaliya oo uu mudo ku noolaa waxuu yiri.
Soomaalida waa dad fiican oo aad u naxariis badan lalana noolaan karo oo si wanaagsan noo soo dhaweeyey, laakinse waxaan aad uga naxay sida kuwo aan diinta aqoon ee ka yimaada wadamo badan oo uu ka xusay Jejniya iyo Afganistaan ay u duleystaan shacabka iyagoo dhaqankasta midba midka ka xun la tagay halkaasi sida laga soo xigtay ninkaasi Masriga ah.
Dhaqan xumida inkasta uu afka aad uga dhowray inuu sheego hadane maba u baahna in maanta loo sheego qof caafimaad qaba waayo umadii ayey kala dagaalayaan tacliinta, ka ugaarsanayaan dugsiyadii qur'aanka, wadankii waxaa maalinkasta ka carara dhalinayro badan oo iyaga ka cararaya iney askareeyaan kadibna ku dhamaada badaha. waxaa u dheer dhaqanada ay ku hayaan dumarka Soomaaliyeed oo la hayo cadeymo badan oo xaqiiqo ah iney qasab ku guursadeen dumar badan oo markii ay diideen iney guursadaan ajaanibta dalka soo gashay waalidkood la dilay, qaarne lagu qasbay iney ogolaadaan si waliba qasab ah kadibna sidaas caruur uga dhaleen iyagoon qaar waalidka ka mid ah k aheysan ogolaansho.
Sikastaba Al - Shabaab iyo Saaxiibadood maanta waxey ku jiraan iney gurtaan mirahii ka soo baxay dhibaatadii ay shacabka ku hayeen waxeyna ku jabeen meelo badan oo dalka ka mid ah iyagoona hada ku soo aruuray dagaal afka ah.
Waxaan shaki ku jirin in ay dalka kaka sugan yahiin goobo cayiman iyagoo wata dumar iyo caruur badan. gawaari qurqurxan,dhaqaalo fara badan hadane waxaasi oo dhan hada lama hayo meel la marsiiyo bad iyo bari waxaa kaka furan dagaalo badan ugu danbeyna hantida iyo baabuurta waxey ku danbeyn doonaan gacanta bulshada Soomaaliyeed.
Ugu danbeyn xaalka Shabaab iyo alqaacidada Soomaaliya kusugan waxuu marayaa waanu socon weynaye aanu cararno oo waxey afka ka ilaalinayaan waanu jabnay maadaama madaxdoodu ay ku mashquulsan yahiin sidii ay u heli lahaayeen goobo nabadoon oo ay ku noolaadaan iyaga iyo caruurtooda, halka shacabku ay soo sheegayaan meelkasta oo ay galaan maadama aysan horey uga sameysan wax wanaag ah bulshada Soomaaliyeed ee inta dalkooda loogu tagay hadane lagu dhibaateyey.
Dadka aragtida fog waxey leeyahiin Soomaaliya masoo marin dad ka xun amaba ka arxan daran Shabaab iyo Al qaacida marka la eego heerka ay wadanka gaarsiiyeen dhawrkii sano ee ay wadanka ka curteen kooxaha argagixisada ah laga soo bilaabo maxkamadahii oo iyagu sabab u ahaa dhibaatada maanta taagan maadaama ay iyagu u yeerteen ragaan la baxay jihaadoonka laakinse ahaa mooryaan diimeedka.
· admin on January 21 2012 12:42:01 · 0 Comments · 1623 Reads ·
14,633,203 unique visits